YOPE Star: Comedian Actor K. Nyi
YOPE July 22, 2016
မင်္ဂလာပါ YOPE ပရိသတ်ကြီးရေ… ပရိသတ်ကြီးတို့ စောင့်မျှော်နေတဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် K ညီ က YOPE ရဲ့မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လို ဟာသမြောက်အောင် ပြန်ဖြေထားသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
YOPE Star: Reggae Singer Saw Pho Kwar
မင်္ဂလာပါ.. yope သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့အတွက် yope star မှာ တင်ဆက်ပေးမယ့်သူကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးတေးသံ တွေကို ယူဆောင်ပေးလာမယ့် raggae အဆိုတော် စောဖိုးခွါး ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ yope star အစီအစဉ်ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုပြန်လည်ဖြေကြားထားတယ်ဆိုတာ… ကြည့်ပါဦး။ သူငယ်ချင်းတို့ကရော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ့် တစ်ခြား အကြံဥာဏ်တွေရှိတယ်ဆိုရင် comment ပေးခဲ့ဦးနော်
Yope Star: KO MIKIS DA SILVA
Yope September 14, 2016
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီတစ်ပတ် အတွက် YOPE star အစီအစဉ်မှာ Red chair ပေါ်ရောက်လာသူကတော့ Ko Mikis Da Silva ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်. မြန်မာသီချင်းတွေကို မှ သီဆိုချင်သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်လိုသူ Mikis က YOPE မေးခွန်း ၅ ခုကို ဘယ်လိုပြန်ဖြေပေးသွားလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ပေးပါဦး .. နော်..
YOPE Star: Ah Moon
YOPE August 25, 2016
မင်္ဂလာပါ Yope သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီတစ်ပတ် yope star ကတော့ အမွန်းပါ။ အမွန်းဆိုတာ သူ့ရဲ့အနုပညာကို နိုင်ငံတကာအထိထိုးဖောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ YOPE Red chair ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီတော့ အမွန်းက Yope star မေးခွန်း၅ခုကို ဘယ်လိုတွေပြန်လည်ဖြေကြားပေးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ video မှာ ကြည့်ပြီးအားပေးပါနော်..
Yope September 21, 2016
မင်္ဂလာပါ ညနေခင်းပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့အတွက် YOPE star ရဲ့ Red Chair ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာသူကတော့ R -Zarni ပဲဖြစ်ပါတယ်. YOPE ရဲ့မေးခွန်း ၅ ခု ကို ဘယ်လိုပြန်ဖြေပေးသွားလဲဆိုတာတော့ Video မှာ ကြည့်ပြီး အားပေးပါဦး သူငယ်ချင်းတို့ရေ….
ဟာသ စာပေတွေရေးနေပေမယ့် သူ့ရဲ့ဘ၀က ပျော်စရာကောင်းရဲ့လား?
YOPE July 14, 2016
Yope ပရိသတ်ကြီး စောင့်မျှော်နေတဲ့ သူကတော့ စာရေးဆရာ အကြည်တော်ပါ။ Yope star အစီအစဉ်ကနေ ဆရာ့ကိုမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဆရာ ဘယ်လိုဖြေပေးထားတယ်ဆိုတာ ကြည့်ရှုပေးပါဦး….
RED Chair Meets Kyat Pha
Yope March 8, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ. ဒီနေ့ YOPE RED Chair နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့သူက ဘယ်သူဆိုတာ အထူးတလည်ပြောပြဖို့လိုမယ်မထင်ဘူးနော်.. rap သီချင်းတွေကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ စကားလုံးကြွယ်ကြွယ် သုံးနိုင်တဲ့သူ. ပရိသတ်တွေအတွက် မမေ့နိုင်စရာ သီချင်းတွေကို ဖန်တီးခဲ့သူ .. သူကတော့ Hip Hop အဆိုတော် ကြက်ဖ ဖြစ်ပါတယ်. ကို ကြက်ဖ ဘာတွေ ဖြေသွားလဲဆိုတာ သူငယ်ချင်းတို့ သိချင်နေမှာပါ. အချိန် ၄ မိနစ်လောက်ပေးပြီး ကိုကြက်ဖကို အားပေးရအောင်. www.yope.com.mm www.mizzima.tv
YOPE Star: Model Tin Moe Lwin
YOPE August 12, 2016
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ဒီနေ့ YOPE Star ရဲ့ red chair ပေါ်မှာတော့ မော်ဒယ်မိခင်ကြီးလို့အများက ခေါ်ကြတဲ့ မတင်မိုးလွင် ရောက်ရှိနေပါပြီ.. YOPE ရဲ့ မေးခွန်း ၅ ခုကို ဘယ်လိုဖြေဆိုပေးသွားလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုစေချင်တာမို့ မပြောပြတော့ဘူးနော်.. အားပေးကြပါဦး.. ဤအစီအစဉ်အား FBT sport wear မှ ၀တ်စုံများထောက်ပံ့ပေးပါသည်။